रहेनन् पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी :: The First Nepali Magazine Published in Australia
काठमाडौं- पूर्व उपप्रधान एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भरतमोहन अधिकारीको निधन भएको छ । उपचारको क्रममा राजधानीको धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा निधन भएको हो । उहाँको शनिबार राती ९ः३५ मिनेटमा निधन भएको अस्पतालले बताएको छ । अधिकारीको पार्थिक शरीर अन्तिम श्रद्धान्जलीको लागि आज (आइतवार) ९ बजेदेखि १२ सम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राखिने नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । स्वर्गीय अधिकारीको श्रीमती र तीन छोरीहरु रहनुभएको छ ।
८२ वर्षको उमेरमा शनिबार निधन हुनुभएका पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीकालाई मुटु, श्वासप्रश्वास र छातीमा संक्रमण देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । माघ २ मा मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएका नेता अधिकारीलाई थप उपचारको लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्न गरिएको थियो । अधिकारीलाई डा. भगवान कोइराला, अर्जुन कोइराला, अर्जुन कार्की लगायतका वरिष्ठ डाक्टरहरुले उपचार गर्नुभएको थियो । अधिकारीको शुक्रबार साँझदेखि पिसाब रोकिएपछि अस्पतालले शनिबार दिउँसो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिदै अधिकारीलाई बचाउन सकिने सम्भावना न्यून भएको बताएको थियो ।
विसं २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने शासनकालमा लोकप्रिय अर्थमन्त्री रहेका अधिकारी त्यसयता चारपटक अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो भने एक पटक यातायात तथा निर्माण मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारी २०५१ सालमा पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुँदा बृद्धाबृद्धालाई भक्ता दिने कार्यक्रम अगाडि सारेर लोकप्रिय बन्नुभएको थियो ।
०५१ मंसिर १४ गते तत्कालीन एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारमा अर्थमन्त्री हुनुभएका अधिकारीले े आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ र तत्कालिन गाविसलाई तीन लाख रुपैयाँ बजेट दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । एक सय रुपैयाँबाट सुरु भएको बृद्धाभक्ता अहिले अहिले दुई हजार पुगेको छ ।
अधिकारीलेले सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रको तीन खम्बे अर्थनीति अंगिकार गर्नुपर्ने मत अघि सार्नुभएको थियो । सफल अर्थमन्त्री भएकै कारण अधिकारी उपप्रधानमन्त्रीसहित चारपटक अर्थमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको थियो ।
अधिकारीको जन्म वि. सं. १९९३ साल बैशाख २२ गते महोत्तरीको भ्रमणपुरा गाउँमा भएको थियो । विराटनगरको आर्दश माध्यामिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिनुभएको अधिकारीले भारतको इलाहावादबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह, बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा स्नातक तथा त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अर्थ शास्त्रमा एमए र कानुनमा स्नातक गर्नुभएको थियो ।
अधिकारीले सन् १९५२ मा १६ बर्षको उमेरमै भारतको बनारसमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएर राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो । २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले कू गरेपछि सोभियत संघमा पीएचडी पढ्न पाएको छात्रबृत्ति त्यागेर सक्रिय राजनीतिमा अधिकारीले आफ्नो जीवनकालभरी देश र जनताको सेवामा लाग्नुभएको थियो । अधिकारीले २०१८ सालदेखि कोशी प्रान्तीय कमिटीको सचिव बनेर पूर्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुको साथै २०१९ मा नेकपाको तेस्रो महाधिवेशनबाट अधिकारी पोलिटब्युरो सदस्य निवार्चित हुनुभएको थियो ।
निरन्तर सक्रिय, विनम्र र मिलनसार व्यक्तित्वका रूपमा परिचित उहाँले आफ्नो करिब सात दशक लामो राजनीतिक जीवन कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास, विस्तार र अग्रगतिमा व्यतीत गर्नुभयो ।
तत्कालिन माले र मार्क्सवादीबीच २०४७ मा पार्टी एकिकरण गराएर एमाले बनाउन पनि अधिकारीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । अधिकारीकै पहलमा २०४६ सालमा सात वाम घटक एक भएर संयुक्त वाम मोर्चा निर्माण भएपछि पञ्चायतबिरुद्ध आन्दोलन सशक्त भएको थियो । २०६२÷०६३ को जन आन्दोलनमा पनि सक्रिय भएर भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेर सत्ता हातमा लिँदा उपप्रधानमन्त्री रहेका अधिकारीलाई तीन महिना घरमै नजरबन्दमा समेत राखिएको थियो । अधिकारी २०४८, ०५१ र ०५६ मा मोरङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको छैठौं, सातौं र आठौं महाधिवेशनबाट उहाँ लगातार स्थायी समितिमा निवार्चित हुनुभएको थियो । अधिकारीको नेपालमा औद्योगकरणको समस्या, मेरो जीवन यात्रा भाग–२ किताब प्रकाशित छन् भने जनताको बहुदलीय जनवादको अर्थशास्त्र प्रकाशोन्मुख छ । पञ्चायत विरोधी संघर्षका क्रममा अधिकारी पटक पटक जेल पर्नुभएको थियो ।
आम नागरिकहरुले नेता अधिकारीलाई ‘आफ्नोे गाउँ आफैं बनाउँ’, ‘बुद्धाबृद्धलाई वृद्धभत्ता’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमका योजनाकार रुपमा चिन्दै आएका छन् ।
२०७१ सालको एमालेको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद कायम गरेपछि अधिकारी सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिदै अध्ययनमा जुटनुभएको थियो । स्वर्गीय अधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका सहोदर भाइ हुनुहुन्छ । दस महिना अघि २०७४ जेठ ३ गते तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि बनेको बनेको नेकपामा भने अधिकारीले स्वास्थ्यको कारण राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्नुभएन । अधिकारीलाई निशंकल आर्दश नेताको रुपमा चिनिने गरेको छ ।
अस्पताले अधिकारीलाई बचाउन नसक्ने सहितको जानकारी गराएपछि शनिबार साझ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री गोकर्ण विष्टले अधिकारी अस्पताल पुग्नुभएको थियो ।
गत माघ २ गते अधिकारीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारमा सुधार नभएपछि ह्याम्स अस्पतालमा पुनःभर्ना गरिएको थियो । जीवनको अन्तिम क्षणमा नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीले पार्टी, देश, समाज र समृद्धिका लागि मिलेर अघि जान नेताहरुलाई सन्देश दिनुभएको थियो । ह्याम्स अस्पतालमा नेता अधिकारीलाई भ्यान्टिलेटरमा राख्नुअघि आफ्नो अन्तिम सन्देश सुनाएको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानकारी जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारीको निधनप्रति नेकपाले पार्टीले अधिकारीको निधनले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको बताएको छ । नेपाली जनताका प्रिय नेता र जनप्रिय अर्थमन्त्रीका रूपमा उहाँको योगदान चीरकालसम्म स्मरणीय रहनेछ ।